AUTOTRADE GOLD - ATG - ရွှေကုန်သွယ်စက်ရုပ် - XAU/USD
အရောင်းအ ၀ ယ်စက်ရုပ်
ကုန်သွယ်ရေးစက်ရုပ်ကိုရွှေစျေးကွက် (xauusd) ထံအပ်နှံသည်။
cryptocurrency စျေးကွက်အတွက် ရည်ရွယ်ထားသော ကုန်သွယ်စက်ရုပ်။
ရေနံဈေးကွက်အတွက် ရည်စူးထားသော ကုန်သွယ်မှုစက်ရုပ်။
ကုန်သွယ်ရေးစက်ရုပ် Forex စျေးကွက်ထံအပ်နှံ။
Crypto ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ▼
Big Data cryptocurrency တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။
သင်၏ crytos ဖြင့်ရွှေနှင့်စိန်များတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။
Ethereum blockchain နှင့်အိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်။
၂၂၀ ကျော် cryptocurrencies ကိုဝယ်ယူသိုလှောင်သိမ်းဆည်းပါ
block blockchain မှ cryptocurrencies အထိဗီဒီယိုသင်ခန်းစာ
တစ်ခုချင်းစီကို cryptocurrency အကြောင်းကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအသိပညာ
DigiPrime.io၊ ပန်းဆာကာ၊ Pantheratrade.
ATG စနစ် (Gold)
atg-system.com သို့ ချိတ်ဆက်ပါ။
atcbot.io သို့ ချိတ်ဆက်ပါ။
Equiti သို့ ချိတ်ဆက်ပါ။
XAU / အမေရိကန်ဒေါ်လာ
AutoTrade Gold ၄.၀ သည်က ကုန်သွယ်စက်ရုပ် ရွှေစျေးကွက်အပေါ်အခြေခံ၍ အင်ဒိုနီးရှားအော်တို။ ATG ဟုလည်း ချစ်စနိုးခေါ်ကြသည်။ Goldဗျာဒိတ်တော်၊ Gold သို့မဟုတ် EA စက်ရုပ် Gold ၎င်း၏အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် သင့်အရင်းအနှီး၏ 0,5 နှင့် 1,5% ကြား နေ့စဉ် အမြတ်ရရှိရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ တစ်နေ့ကို 3% ထက် ပိုမဆုံးရှုံးနိုင်ပါဘူး။ ဤစက်ရုပ်သည် scalping မုဒ်တွင် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ပြီး တစ်ကြိမ်လျှင် အနေအထားတစ်ခုသာဖွင့်သည်။ လုံခြုံစွာ၊ ATG5သည် အရှုံးတစ်ခုကို မှတ်တမ်းတင်ပါက၊ ၎င်းသည် နေ့စဥ်အတွင်း ၎င်း၏အမြတ်အစွန်းအတွက် ဒုတိယမြောက် ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ရန် ကြိုးစားမည်ဖြစ်သည်။ ရှာဖွေတွေ့ရှိသည်။ AutoTrade CryptoBitcoin တွင် 7/7 ရက်အတွင်း အမြတ်များရရှိစေသည့် ကုန်သွယ်မှုစက်ရုပ်အသစ်။
အပေါ်မှတ်ပုံတင်ပါ AutoTrade Gold သင်ခန်းစာကို အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်။
📀 EA ATG5ကို လုံးဝ ဒေါင်းလုဒ်ရယူနိုင်ပါတယ်။ broker.
Auto Trade တွင်လိုင်စင် ၁ စျေးနှုန်း Gold
အနည်းဆုံး အလုံးစုံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အကြံပြုထားသည်။
စက်ရုပ်၏အားသာချက်များ AutoTrade Gold
သင့်ကိုယ်ပိုင်ရန်ပုံငွေများကို စီမံခန့်ခွဲပြီး ထိန်းချုပ်ပါ။ broker LegoMarket LCC အက်ပ်ကိုသုံးခြင်း MetaTrader4ou နှင့် broker သင်၏ရွေးချယ်မှု စက်ရုပ်ကို Pansaka ဝဘ်ဆိုဒ်မှ ဝယ်ယူပြီး ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်းဖြင့် (အောက်ပါ သင်ခန်းစာ၏ အဆင့် ၂). သင်တစ်ဦးတည်းသာ သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့ ဝင်ရောက်နိုင်သည်- ကနဦးရန်ပုံငွေ + ထုတ်ပေးသည့် ၀င်ငွေ + အတိုးနှုန်း။
ထည့်သွင်းရန် software မရှိပါ။ ကုန်သွယ်မှုကျွမ်းကျင်မှုမလိုအပ်ပါ။
ကုန်သွယ်ရေးဖြေရှင်းချက်ကတီထွင်ခဲ့သည် ပဿကာရွှေဈေးကွက်ကို အာရုံစိုက်တယ်။
လစဉ်ပြန်လာအတွက်ပျမ်းမျှ passive ဝင်ငွေ 15% ။
စျေးကွက်အခြေအနေ2နှစ်ကျော်။
အတွေ့အကြုံအနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၆၀၀ နှင့်စတင်ပါ။
ခြေရာခံခြင်း tool ကို
သင့်လျှောက်လွှာတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာသောရလဒ်များ MetaTrader 4.
15% ဝင်ငွေ / လနှင့်အတူ AutoTrade Gold
Auto Trade နှင့် Gold 5.0
🚧 သတိထားပါ၊ ဆိုက်ကို ထိန်းသိမ်းထားသရွေ့ Youtube မှာ ဗီဒီယို မရနိုင်တော့ပါဘူး။ Pantheratrade နေရာတွင် ရှိနေသေးသည်။ အောက်တွင်ရေးထားသောသင်ခန်းစာကိုအမြဲတမ်း update လုပ်လိမ့်မည်။
သင်၏ cryptocurrencies ကို ၀ ယ်ရန်နှင့်ရောင်းရန်ခွင့်ပြုသည့်ပလပ်ဖောင်းသည်သင်၏စက်ရုပ်နှင့်၎င်းတို့ကိုကျွေးမွေးရန်ခွင့်ပြုသည်။ broker LegoMarket ။
ATG သို့ ချိတ်ဆက်ထားသော API ပလပ်ဖောင်း broker LegoMarket ။
သင်၏လိုင်စင်ကို Pansaka တွင်ဝယ်ပါ။
သင့်တစ်သက်တာလိုင်စင်ကို ဝယ်ယူခွင့်ပြုသည့် ချိတ်ဆက်မှုပလက်ဖောင်း။
ရုပ်ပုံပြခန်း Autotrade Gold Instagram ကို
ပေါင်းစပ်အကျိုးစီးပွားမပါဘဲ ATG 5.0 အမြတ်အစွန်း၏တွက်ချက်မှု
အောက်ပါဇယားသည်ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်ယူပြီးဖြစ်ရပ်မှန်အတိအကျကိုရောင်ပြန်ဟပ်မည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်သင်၏အရင်းအနှီး၏ဆင့်ကဲပေါ် မူတည်၍ ငွေပေါ်တွင် မူတည်၍ ဖော်ပြသည် တစ်လလျှင် 15% တိုးမြှင့်တိုးပွားလာ. ဤတွက်ချက်မှုတွင် နေ့စဉ် ဒြပ်ပေါင်းအတိုးကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားခြင်းမရှိပါ။ သင့်ဝင်ငွေများကို လစဉ် ရုပ်သိမ်းပါက၊ သင်သည် မည်သည့်အရာကိုမျှ မရုပ်သိမ်းပါက သင်၏ ကနဦးရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်6လကို ပြန်လည်ရယူရန် ခန့်မှန်းခြေ4လ ကြာမည်ဖြစ်သည်။
+ 300.000 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ ATG5ရလဒ်များ
အပ်ငွေ - ယူရို ၅၀၀
+ လိုင်စင် ၁ (၁၆၇ ဒေါ်လာ)
⚠️ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတိုင်းအတွက် အရေးကြီးသော သတိပေးချက်များနှင့် အကြံဉာဏ်များ
၎င်းသည် အသက်ရှင်သန်ရန် မလိုအပ်သည့် ငွေကို မြှုပ်နှံထားသည့် အန္တရာယ်များသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်ကြောင်း သတိရပါရန်နှင့် သင်၏ မူလရည်မှန်းချက်မှာ သင်၏ ကနဦးအရင်းအနှီးကို တတ်နိုင်သမျှ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပြန်လည်ရယူရန်ဖြစ်သည်။
နမူနာဗျူဟာ : ငါ $10.000 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုက်ပါ။ AutoTrade Gold. ပြန်မထုတ်ဘဲနဲ့5လမှာ အရင်းနှစ်ဆရမယ်။ ကျွန်ုပ်သည် $22.000 သို့ရောက်ရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်၊ စက်ရုပ်က ၎င်းတို့ကို ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်း ထုတ်ပေးသည့်အခါတိုင်း $2000 ကို စတင်ထုတ်ယူပါသည်။ ဒါကြောင့် သူတို့ဆီရောက်တိုင်း $22.000 ကနေ $20.000 ကို ထုတ်ယူလိုက်တယ်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏ကနဦးအရင်းအနှီးကို9လထက်နည်းသောအချိန်အတွင်း ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီး လစဉ် $3000 (20.000 x 15%) ၏ ကျေးဇူးကြောင့် လစဉ် passive ၀င်ငွေကို ထုတ်ပေးပါသည်။ Autotrade Gold.
သင်၏ကုန်သွယ်နိုင်စွမ်းပေါ် မူတည်၍ လိုင်စင် ၃ ခုရနိုင်သည်
လိုင်စင်များကို အဆင့်မြှင့်နိုင်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် လက်ရှိလိုင်စင်နှင့် လိုချင်သောလိုင်စင်အကြား ကွာခြားချက်ကိုသာ ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ စက်ရုပ်သည် အရင်းအနှီး $100 အောက်တွင် အရောင်းအ၀ယ်မလုပ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည် သင့်ကုန်သွယ်အကောင့်တွင် $50 သတ်မှတ်ချက်ဘောင်ကို ရုပ်သိမ်းပြီး ကျော်သွားပါက၊ သင်သည် သင်၏လိုင်စင်ကို ဆုံးရှုံးမည်ဖြစ်သည်။
နမူနာ : လိုင်စင်2ကို $5000 (အပ်ငွေအရင်းအနှီး + နေ့စဥ်ဝင်ငွေ) ကန့်သတ်ထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဤလိုင်စင်ဖြင့် သင်၏အရင်းအနှီးကို ဥပမာအားဖြင့် $3000 သွင်းပြီး $2000 ၀င်ငွေရရှိသည်နှင့်၊ သင်သည် တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသော အများဆုံး $5000 သို့ ရောက်ရှိသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုမှနေ၍ သင့်စက်ရုပ်သည် အရောင်းအ၀ယ်ရပ်သွားလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် သင့်ဝင်ငွေ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ပြန်လည်ရယူရန် သို့မဟုတ် ပိုမိုမြင့်မားသော လိုင်စင်ကို ရယူရမည်ဖြစ်သည်။ သင့်စက်ရုပ်မရပ်တန့်မီ အဆင့်မြှင့်တင်ရန် မမေ့ပါနှင့်၊ မဟုတ်ပါက သင်သည် နည်းပညာဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကူညီမှုထံ ဆက်သွယ်ရမည် သို့မဟုတ် ဆိုက်နှင့် စက်ရုပ်၏ချိတ်ဆက်မှုကို ကိုယ်တိုင်ပြန်လည်စတင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ATG စနစ်. ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက် ခလုတ်တစ်ခုကို ပေးထားသည်။
စုစုပေါင်းအရင်းအနှီး 100 နှင့်အကြား 500 $.
စုစုပေါင်းအရင်းအနှီး 100 နှင့်အကြား 5.000 $.
စုစုပေါင်းအရင်းအနှီး 100 နှင့်အကြား 30.000 $.
စုစုပေါင်းအရင်းအနှီး 100 နှင့်အကြား 1.000.000 $.
အနည်းဆုံး အရင်းအနှီးအတွက် 1.000.000 $.
ATG5နည်းပညာပံ့ပိုးမှု
မကြာခဏမေးခွန်းများ Autotrade Gold 5.0
Trading Bot နှင့်ပတ်သတ်သောနောက်ထပ်အချက်အလက်များ
ငါ့မှာမေးခွန်းတွေရှိတယ် AutoTrade Gold, Pantheratrade, Pansaka သို့မဟုတ် ATG စနစ်
သင်နှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများရှိပါက AutoTrade Gold ၅.၀၊ မင်းရဲ့တိုက်ရိုက်စပွန်ဆာနဲ့ပိုနီးစပ်ဖို့ငါမင်းကိုအကြံပေးတယ်။ နည်းပညာပံ့ပိုးမှုမှဖြစ်သည် PantheraTrade ဝန်ထမ်း ၇၀ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်းတို့ကို ဆက်သွယ်ရန်အတွက် သင်သည် လက်မှတ်ကိုဖွင့်ပြီး သင်၏တောင်းဆိုမှုကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် တိကျစွာရှင်းပြပြီး ပိုမိုနားလည်နိုင်စေရန် ပူးတွဲပါဖိုင်ကို ပူးတွဲတင်ပြရမည်ဖြစ်သည်။ ပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်လျှင် ၎င်းတို့ကိုသာ ဆက်သွယ်ပါ၊ သို့မဟုတ်ပါက သင့်စပွန်ဆာကို ဖုန်းဆက်ပါ။ လိုင်စင်ပြဿနာများအတွက်၊ သင့်စက်ရုပ်နှင့်ချိတ်ဆက်မှုပြဿနာများအတွက် Pansaka ပံ့ပိုးကူညီမှုထံ ဆက်သွယ်ပါ။ ATG စနစ်.
နည်းပညာအထောက်အပံ့အတွက်လက်မှတ်ဖွင့်ပါ သတင်းကိုလိုက်နာရန် Telegram မှ RDV
အချို့စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ Autotrade Gold 5.0?
မှနည်းပညာဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှု Panthera သင်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည့်ပြtheနာများကိုကူညီပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကမကထပြုသူအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့အားတောင်းဆိုသော်လည်းလက်မှတ်ကိုဖွင့ ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်တောင်းဆိုရန်မှာအလွန်အရေးကြီးသည်။ https://panthera.support
အဆင့် ၁ / PantheraTrade
စက်ရုပ်တွင် စာရင်းသွင်းရန် လိုက်နာရမည့် အဆင့်များ Autotrade Gold 5
အသုံးပြုရန်အကြံပြုလိုပါသည်။ Yahoo သို့မဟုတ် Gmail လိပ်စာ စာရင်းသွင်းတဲ့အခါ။ အချို့မှာ Hotmail၊ Live၊ Wanadoo၊ Laposte လိပ်စာများဖြင့် အီးမေးလ်ဖြင့် အတည်ပြုရာတွင် ပြဿနာများ ရှိခဲ့သည်။
အပေါ်မှတ်ပုံတင်ပါ AutoTrade Gold 5.0
လိုအပ်သော ကွက်လပ် ၅ ခုကို ဖြည့်ပါ။
1 - သင်၏အသုံးပြုသူအမည်ကိုဖန်တီးပါ။
2 - သင့်အမည်နှင့် သင်၏နောက်ဆုံးအမည်ကို ရေးပါ။
3 - သင့်နေထိုင်ရာနိုင်ငံကို ရွေးချယ်ပါ။
4 - သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်ကို ထည့်ပါ။
5 - သင့်အီးမေးလ်ကိုထည့်ပါ။ (ဖြစ်နိုင်ရင် Gmail)
ဝန်ဆောင်မှုစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို လက်ခံပြီးနောက် တင်သွင်းပါ။
📨 Autotrade သည် သင့်စကားဝှက်ကို အီးမေးလ်ပို့လိုက်ပါပြီ။ ၎င်းကို နောက်ပိုင်းတွင် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။5မိနစ်အတွင်း လက်ခံမရပါက၊ အကောင့်ဝင်ခြင်းစာမျက်နှာမှ စကားဝှက်ကို မေ့ထားရန် တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
you သင့်တွင် cryptocurrency account မရှိပါကသင့်အားအကြံပေးပါသည်။ အခုပဲအကောင့်တစ်ခုဖန်တီးရန်၊ BinanceCoinbase၊ Kraken... ဥပမာ၊ Crypto.com ကဲ့သို့ သင့်ငွေထုတ်ခြင်းကို2နာရီထက်ပို၍ ပိတ်ဆို့သည့် လဲလှယ်မှုများကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ သင်သည် crypto တွင် ၀ ယ်နိုင်သည်။ Binance သင်၏အကြွေးဝယ်ကတ်နှင့်။ သို့သော်လည်း သင့်ဘဏ်မှ ကန့်သတ်ထားသော ငွေထုတ်ကန့်သတ်ချက်တွင် သင် ပိတ်မိနေလိမ့်မည်။ ဘဏ်ငွေလွှဲမှုများ ပြုလုပ်ရန်နှင့် ငွေပမာဏ ပိုများစေရန် SEPA ဝန်ဆောင်မှုကို သင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Binance.
အပေါ်မှတ်ပုံတင်ပါ Binance tutorial Binance
အကယ်၍ သင့်ဖုန်းနံပါတ်ကို စာရင်းသွင်းပြီးပါက၊ သင်သည် ပြင်သစ်တွင်နေထိုင်ပါက 06 ကို 336 ဖြင့် အစားထိုးနိုင်ပါသည်။ ဒုတိယအခွင့်အရေးအဖြစ် ခေါ်ဆိုမှုသင်္ကေတကို အသုံးပြုပါ။
အဆင့် ၄ / Pansaka
အပေါ်မှတ်ပုံတင်ပါ ပဿကာ သင်၏ ATG5လိုင်စင်ကိုရယူရန်
Pansaka သည် Autotrade ကုန်သွယ်မှု ထုတ်ကုန်များ၏ လိုင်စင်အားလုံးကို ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်သည့် ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ရှိသင့်တာကို မမေ့ပါနဲ့။USDT သို့မဟုတ် သင်၏လိုင်စင်ကိုဝယ်ရန် သင်၏လဲလှယ်မှုတွင် Litecoin LTC။
နာမည် + နာမည်
နောက်ဆုံးပေါ်အထောက်အထားကတ် (သို့) နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နံပါတ်
စကားဝှက် + အတည်ပြုချက်
- ရွေးချယ်ပါ။ USDT
Crypto လိပ်စာ: သင်၏ငွေသွင်းလိပ်စာကိုဖော်ပြပါ။ USDT
(Ethereum ERC 20 ကွန်ရက်) သာ
မင်းရဲ့လိုင်စင်ကိုဘယ်လိုအဆင့်မြှင့်တင်မလဲ အော်တိုGold 5.0?
Pansaka ကုမ္ပဏီ၏ပင်မစာမျက်နှာတွင် tab ကိုနှိပ်ပါ အထူးအစီအစဉ်> အနာဂတ် Package ကို ၀ ယ်ပါ ပြီးလျှင် သင်အပ်နှံလိုသော ကုန်သွယ်မှုပမာဏအလိုက် လိုင်စင်ကို ရွေးချယ်ပါ။
💡 စက်ရုပ်၏အရောင်းအ၀ယ်နှင့် ၎င်း၏ passive ၀င်ငွေကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်အတွက် လိုင်စင် 1 နှင့် စပေါ်ငွေ $110 ဖြင့် စတင်ရန် သင့်အား အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ထို့နောက် ၎င်းတို့တစ်ခုစီကြား ခြားနားချက်ကိုသာ ပေးဆောင်ခြင်းဖြင့် သင်၏လိုင်စင်များကို အဆင့်မြှင့်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် Litecoin (LTC) ကို ဝယ်ယူခြင်းဖြင့် စတင်ပါ။ Binance ငွေပမာဏနှင့်အတူ အကြွေးဝယ်ကတ်ဖြင့် 250€.
သင့်လိုင်စင်အတွက် ပေးချေရန်နှင့် သင့်ငွေများကို ဘဏ်တွင် အပ်နှံရန် broker၎င်း၏လွယ်ကူမှု၊ မြန်ဆန်မှုနှင့် နိမ့်သောငွေပေးငွေယူအခကြေးငွေများအတွက် Litecoin (LTC) ဖြင့် ဝယ်ယူခြင်းနှင့် ပေးချေရန် ကျွန်ုပ်တို့ အကြံပြုအပ်ပါသည်။
CoinPayment ကို အသုံးပြု၍ သင့်လိုင်စင်ကို အသက်ဝင်စေရန် တစ်နာရီကြာသည်။
ဤဥပမာတွင်၊ ကျွန်ုပ်သည် ATG စက်ရုပ်၏လိုင်စင်2ကိုရွေးချယ်ထားသည်။ broker LegoMarket ။
ခလုတ် 1- cryptocurrency ဖြင့် ငွေပေးချေမှုကို ရွေးချယ်ရန် ဤခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ ပေါ့ပ်အပ်တစ်ခုပွင့်လာမည်ဖြစ်ပြီး၊ Crypto ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးနောက် အတည်ပြုပါ။
ခလုတ် 2- ငွေတောင်းခံလွှာကို အတည်ပြုပြီး ဝင်ရောက်အသုံးပြုပါ။
ထို့နောက် Coinpayment ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
အဆင့်6/ Coinpayment
သင့်လိုင်စင်ကိုငွေပေးချေခြင်း Autotrade Gold CoinPayment နှင့်အတူ Litecoin (LTC)
သင့်ငွေပေးချေမှုအချက်အလက်ကို ဘယ်ဘက်ရှိ သင်၏အမည်၊ နောက်ဆုံးအမည်နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာဟု ဖြည့်စွက်ပါ။ (သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာတွင် အမှားအယွင်းမရှိစစ်ဆေးပါ). ညာဘက်တွင်၊ cryptocurrency ကိုရွေးချယ်ပါ။ Litecoin (LTC) သည်၎င်း၏အနိမ့်အရောင်းအဝယ်ကုန်ကျစရိတ်အတွက်
နောက်ဆုံးတွင်ပုံစံအားအတည်ပြုရန်အီးမေးလ်အောက်ရှိဘယ်ဘက်ရှိအပြာရောင်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ ငွေပေးငွေယူကို အပြီးသတ်ရန် CoinPayment ဖြင့် မှတ်ပုံတင်ရန် လုံးဝမလိုအပ်ပါ။
CoinPayment စာမျက်နှာအသစ်တစ်ခုပွင့်လာပြီး သင့်ကိုပြသမည်ဖြစ်သည်။ ငွေပမာဏ လည်းပဲLTC လိပ်စာ သင်၏လဲလှယ်မှုတွင် ၀ ယ်ထားပြီးဖြစ်သောသင်၏ Litecoin (LTC) ကိုသင်လွှဲပြောင်းရလိမ့်မည်။BinanceCoinbase, စသည်)
အပေါ် Binance၊ ဒီမှာ link ပါ။ ဘဏ်ကတ်မှ Litecoin ကိုဝယ်ပါ။.
အဆင့်7/ Coinpayment
သင်၏လိုင်စင်အတွက်ငွေပေးချေမှုအပြီးသတ် Autotrade Gold.
မင်းရဲ့ ငွေလဲတာမျိုးကို သွားပါ။ Binanceငွေထုတ်ရက်အတိအကျလုပ်ပါ။LTC လိပ်စာ တောင်းဆိုထားသည်။. တောင်းဆိုထားသည့်ပမာဏတွင် 0,001 LTC ကို ထည့်ရန် မမေ့ပါနှင့် သို့မဟုတ်ပါက ငွေလွှဲခြင်းကို ငြင်းပယ်မည်ဖြစ်ပြီး CoinPaiment မှတစ်ဆင့် သင့်အား ငွေပြန်အမ်းမည်ဖြစ်သည်။ အပြန်တွင် Coinpayment ဖြင့် အခကြေးငွေကို အသုံးပြုပါမည်။
လက်ခံသူ၏ LTC လိပ်စာကိုရိုက်ထည့်ပါ။ ၎င်းသည် Coinpayment သို့ပို့သောလိပ်စာ (စာကြောင်း) ဖြစ်သည်။
ထည့်ခြင်းဖြင့် LTC ပမာဏကို ညွှန်ပြပါ။ နောက်ဆုံးစျေးနှုန်းမှာ 0,001
အတည်ပြုစာကိုသင်လက်ခံရရှိလိမ့်မည် Binance နှင့် CoinPayment သည် လွှဲပြောင်းမှု အောင်မြင်ကြောင်း သင့်အား ပြောပြသည်။ အမှားလုပ်မိရင် မထိတ်လန့်ပါနဲ့။ ငွေပေးငွေယူအခကြေးငွေကိုဆန့်ကျင်ပြီး CoinPaiment မှတစ်ဆင့် မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း ငွေပြန်အမ်းရန် အီးမေးလ်တစ်စောင် လက်ခံရရှိပါမည်။ သင်၏ spam ကိုစစ်ဆေးပါ။ သင့်အား ဖော်ပြရမည်။ LTC ငွေသွင်းရန်လိပ်စာ.
ဖွင့်လှစ်ခြင်း။ MT4 အကောင့် မှာ အရောင်းအဝယ်ဖြစ် Pantheratrade.
ကုမ္ပဏီမှကမ်းလှမ်းသောအမျိုးမျိုးသောကုန်သွယ်စက်ရုပ်များကိုအသုံးပြုရန်အတွက် PantheraTradeသင်တစ်ဦးကိုဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်။ ပုံမှန် MT4 အကောင့်. ၎င်းသည် သင့်အတွက် ရရှိနိုင်သော ထုတ်ကုန်အားလုံးကို ဗဟိုချုပ်ကိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဒီလိုလုပ်ဖို့၊ link ကိုနှိပ်ပါ။ ပုံမှန်အကောင့်များ > MT4 အကောင့်. ထို့နောက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ MT4 အကောင့်ကို ဖန်တီးပါ။
သင့်ကိုပြောင်းလဲပါ ယာယီစကားဝှက် အီးမေးလ်ဖြင့်လက်ခံရရှိခဲ့သည်။
သင့်အသုံးပြုသူအမည်နှင့် ယာယီစကားဝှက်ကို အီးမေးလ်ဖြင့် ယခုလေးတင် လက်ခံရရှိထားပါသည်။ သင့်အသုံးပြုသူအမည်သည် သင်၏ လော့ဂ်အင် ဝင်ရောက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ယခု ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ ယာယီစကားဝှက်ကို ပြောင်းလဲပါမည်။
ဒါကိုလုပ်ဖို့၊ မျက်နှာပြင်ရဲ့ ဘယ်ဘက်အောက်ခြေရှိ လင့်ခ်ကို နှိပ်ပါ။ Login Password ကို ပြန်လည်သတ်မှတ်ပါ။. ပထမအကွက်တွင် အီးမေးလ်မှရရှိသော သင်၏ယာယီစကားဝှက်ကို ထည့်သွင်းပါ၊ ထို့နောက် အောက်ပါအကွက်နှစ်ခုတွင် အကောင့်ဝင်စကားဝှက်အသစ်ကို ထည့်သွင်းပါ။
သင့်အကောင့်ကိုဖန်တီးပါ Autotrade Gold.
ပထမဦးစွာ link ကိုနှိပ်ပါ။ CopyTrade အကောင့်များ > MT4 အကောင့်. ညာဘက်အပေါ်ထောင့်ရှိ အပြာရောင်ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ နယူးအကောင့် Create
ရှေးခယျြ အော်တိုကုန်သွယ်မှုGold အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပါ၊ ထို့နောက် ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ MT4 အကောင့်ကို ဖန်တီးပါ။.
စာမျက်နှာအသစ်တွင် ဇယားတစ်ခုပေါ်လာသင့်သည်။ သင်၏ MT4 အကောင့်ဝင်အကောင့်နှင့် သင်၏ MT4 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ စကားဝှက်ကို လုံခြုံအောင်ထားပါ။ ၎င်းတို့ကိုလည်း သင့်ထံ အီးမေးလ်ဖြင့် ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။ ဤကုဒ်များသည် သင့်အား ကုန်သွယ်မှုများသာမက သင့်နေ့စဉ်အကောင့်ကိုပါ လိုက်လျှောက်နိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။
သင့်အားပေးဆောင်ပါ။ KYC အတွက် သင့်အကောင့်ကိုအတည်ပြုရန်။
သင့်အကောင့်ကို တရားဝင်စေရန်အတွက် တောင်းဆိုထားသော သက်သေခံကတ်ပြား (နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် သို့မဟုတ် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်) သုံးခုထဲမှ တစ်ခုကို ပေးဆောင်ရပါမည်။ သတိပြုရန်၊ သင်၏အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းသည် သက်တမ်းကုန်မည်မဟုတ်လျှင် သင်၏ KYC သည် အလိုအလျောက် ငြင်းပယ်ခံရမည်ဖြစ်သည်။
သင်အလိုရှိသော ID အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပြီးနောက် သင့်စမတ်ဖုန်းဖြင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ပါ။
အကွက်ထဲတွင် သင်အလိုရှိသော ID နံပါတ်ကို ထည့်ပါ- ID နံပါတ်ကို ရိုက်ထည့်ပါ။
သင့်ဓာတ်ပုံကို အပ်လုဒ်လုပ်ပါ။ (တရားဝင် တိုးချဲ့မှု- jpg၊ jpeg သို့မဟုတ် png). 1 Mo အလေးချိန်ထက် မပိုစေရပါ။ မပို့မီ သင့်ဓာတ်ပုံကို ပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ရန် ဆိုက်ကို အသုံးပြုပါ။ မင်္ဂလာပါ.
စာမကျြနှာတှငျ Update KYC အတွက်"ဆိုင်းငံ့" မုဒ်တွင် သင့်အခြေအနေကို သင်မြင်ရပါမည်။ အဖွဲ့ကို အချိန်ပေးပါ။ Pantheratrade သင်၏အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းကိုအတည်ပြုရန်။
ပေးဆောင်ပါ။ ဘောက်ချာ သင်၏အပ်ငွေလိပ်စာကို အတည်ပြုရန်။
Profile Voucher သည် စက်ရုပ်၏အနိုင်ရရှိမှုများကို လက်ခံရရှိရန် သင့်အပ်ငွေလိပ်စာ၏ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤလိပ်စာသည် BTC၊ ETH သို့မဟုတ် ဖြစ်နိုင်သည်။ USDT erc20 / trc20။ ကျွန်ုပ်တို့မှအကြံပြုပါသည်။USDT ၎င်း၏နိမ့်သောငွေပေးငွေယူကုန်ကျစရိတ်နှင့်တည်ငြိမ်မှုအတွက် trc20 (trx)။
လင့်ခ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ ပရိုဖိုင်ဘောက်ချာများ ထို့နောက်ခလုတ်ကိုအပေါ် ဘောက်ချာအသစ်ဝယ်ပါ။
crypto ကိုရွေးချယ်ပါ- ETH၊ BTC၊ USDT TRC20 သို့မဟုတ် USDT ERC20၊ ထို့နောက် အတည်ပြုပါ။
စာမျက်နှာ၏အောက်ခြေတွင်၊ Manual Checkout ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ၊ ငွေပေးချေမှုပြုလုပ်ရန်အတွက် Coinpayments သို့ သင့်အား ပြန်လည်ညွှန်းပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
jour à Mise Update ပရိုဖိုင်းကို.
ပရိုဖိုင်ဘောက်ချာကို ပေးဆောင်ပြီး သင့်ဘောက်ချာကုဒ်ကို ဇယား၊ ကော်လံတွင် ပေါ်လာသည်။ ဘောက်ချာ. သင်၏ KYC ကို အတည်ပြုနေပါသည်။ ယခု Profile တွင် ဖြည့်သွင်းပြီးပါပြီ။
ပထမဦးစွာ သင့်လိပ်စာကို ထည့်သွင်းပါ။ USDT trc20 နှင့်/သို့မဟုတ် erc20 ထို့နောက် validate လုပ်ပါ။
အီးမေးလ်ဖြင့် OTP ကုဒ်ကို လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဤကုဒ်ကို ပထမအကွက်တွင် ထည့်သွင်းရပါမည်။
ဒုတိယအကွက်တွင်၊ စာမျက်နှာပေါ်တွင်သင်တွေ့ရမည့် Voucher ကုဒ်ကိုထည့်ပါ။ ပရိုဖိုင်ဘောက်ချာဘောက်ချာကော်လံ။ ထို့နောက် အတည်ပြုပါ။
သင်၏ကုန်သွယ်ရေးအရင်းအနှီးကိုမည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း PantheraTrade ? (၁/၃)
လိုင်စင်ကို ငွေပေးချေမှု လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ရှိနေသည်ဟု ယူဆပါသည်။
ကျနော်တို့ site ကိုမှပြန်လာ PantheraTrade နှင့်အတူကုန်သွယ်မြို့တော်အပ်နှံနိုင်ရန်အတွက် broker Lego စျေးကွက် LCC ။
အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ ကူးယူရောင်းဝယ်ရေးအကောင့်များ > MT4 အပ်ငွေ
ထိုအခါ button ကို click MT4 အသစ်အပ်ငွေ
ပုံမှန်အားဖြင့်ဤသူသည်သင်၏ပထမဆုံးသိုက်ဖြစ်သည် PantheraTrade, သို့သော်နောက်ပိုင်းတွင်သင်သည်သင်၏မြို့တော်တိုးမြှင့်ဖို့လိုလျှင်, သင်ဤခြေလှမ်းပြန်လာရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။ သိုက်ပမာဏသည်သင်၏လိုင်စင်ရွေးချယ်မှုပေါ်တွင်လည်းမူတည်ကြောင်းစိတ်စွဲမှတ်ထားပါ။
Amount US $: ဒေါ်လာဖြင့်သင်ထည့်သွင်းလိုသောပမာဏကိုဖော်ပြပါ
ပစ်မှတ် - အကောင့်
အကောင့်ကို ရွေးပါ- သင်၏ ATG အကောင့်နံပါတ် Gold
အဆင့် ? / PantheraTrade
နှင့်သင်၏မြို့တော်အပ်နှံ အကြွေစေ့ငွေပေးချေမှု။ (၁/၃)
Litecoin (LTC) ကိုရွေးချယ်ပါ။
သင့် Litecoins LTC ကို အပ်နှံရမည့် ပမာဏနှင့် လိပ်စာတို့ကို ပေးဆောင်သည့် CoinPayment တွင် စာမျက်နှာအသစ်တစ်ခု ဖွင့်ပါမည်။
💡 ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ၊ ဤငွေသွင်းလိပ်စာအသစ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သင်၏လိုင်စင်ကဲ့သို့တူညီသောအပ်ငွေလိပ်စာမဟုတ်ပါ။
နှင့်သင်၏ကုန်သွယ်မြို့တော်အပ်နှံ PantheraTrade။ (၁/၃)
လိုင်စင်ဝယ်ယူဘို့ကဲ့သို့တူညီသောခြယ်လှယ်။ အတူ Binanceတောင်းဆိုထားသော LTC ပမာဏသို့ 0.001 ကို ပေါင်းထည့်ခြင်းဖြင့် အတိအကျ ငွေပေးချေမှု ပြုလုပ်ပါ- https://www.binance.com/fr/.../crypto/LTC.
Coinpayment တွင်ဖော်ပြထားသည့်လက်ခံသူ၏ LTC လိပ်စာကိုရိုက်ထည့်ပါ။
LTC ပမာဏကိုဖော်ပြပြီးနောက်ထည့်ပါ နောက်ဆုံးစျေးနှုန်းမှာ 0,001.
minutes ဆယ်မိနစ်အနည်းငယ်စောင့်ပါ။ အတည်ပြုစာကိုသင်လက်ခံရရှိလိမ့်မည် Binance ငွေလွှဲမှုမှန်ကန်ကြောင်းသင်သိစေရန် CoinPayment နှင့်။
အော်တိုကုန်သွယ်ရေး၏တတ်အားသရွေ့နည်းပညာပံ့ပိုးမှု Gold အရောင်းအ ၀ ယ်ကိုအတည်မပြုနိုင်ပါ၊ သင်၏ MT4 အက်ပလီကေးရှင်းတွင်သင်၏ပမာဏကိုသင်မြင်ရမည်မဟုတ်ပါ။
အဆင့် ၁၃ / Pansaka / ATG-System
ATG System နှင့် Pansaka ကိုတွဲဖက်ပါ
ATG စနစ်သို့ ချိတ်ဆက်ပါ။
https://atgbot.co သို့ ချိတ်ဆက်ရန်၊ ဖွင့်ထားသည့် အီးမေးလ်နှင့် စကားဝှက်ကို အသုံးပြုပါ။ Pantheratrade.
သင်၏လိုင်စင်အားစနစ်ထဲသို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်မိနစ်အတော်ကြာစောင့်ပါ။ ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည်သင်၏ပထမဆုံးလိုင်စင် ၀ ယ်ခြင်းနှင့်သင်၏နောက်လိုင်စင်များကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းအတွက်အကျုံးဝင်သည်။ Cala သည်သင်၏လိုင်စင်အသစ်ကိုသင်၏ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်နှင့်ပေါင်းစည်းခွင့်ပြုသည်။
သင်လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည် အီးမေးလ်တစ်စောင်လက်ခံပါ။ atgbot.co မှ (သင်၏ spam ကိုလည်းစစ်ဆေးပါ).
အီးမေးလ်တွင်ရှိသော ဘောက်ချာကုဒ်နှင့် ဘောက်ချာ ID ကို ထုတ်ယူပါ။
သင့်ကုဒ်များကို အသုံးပြု၍ ATG စနစ်ဝဘ်ဆိုဒ်သို့ သွားပါ။ Pantheratrade သင်၏လိုင်စင်ကို အသက်သွင်းပါ- https://atgbot.co/user/ea/activate
ကောင်းစွာညွှန်ပြပါ ကျွန်တော့်မှာ Trade Account တစ်ခုရှိတယ်
သင့်ကိုရွေးချယ်ပါ compte Gold
⚠️ သင့်လိုင်စင်ကို "ချိတ်ဆက်ထားသည်" သေချာပါစေ။ လိုအပ်ပါက "Refresh" ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ ကွန်ရက်ပြည့်သွားပါက နာရီအနည်းငယ်ကြာပြီးနောက် စမ်းကြည့်ပါ၊ သို့မဟုတ်ပါက ဖွင့်ပါ။ ATG စနစ်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုလက်မှတ် သင်၏ ATG5စက်ရုပ်ကို အသက်သွင်းရန် ၎င်းတို့အတွက်။
အဆင့် ၁ / MetaTrader 4
app မှသင်၏ ၀ င်ငွေကိုမည်သို့ခြေရာခံမည်နည်း MetaTrader4?
MT4 သည် သင့်ဝင်ငွေများ၏ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကို လိုက်လျှောက်နိုင်စေမည့် အခမဲ့မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သည် Android သို့မဟုတ် IOS တွင်ဖြစ်စေ စတိုးဆိုင်များတွင် အလွယ်တကူ ရှာတွေ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ လိုဂိုကို ကောင်းကောင်းကြည့်ပါ၊ သင်သည် MetaTrader ဗားရှင်း4လိုအပ်ပါသည်။
ထည့်သွင်းပြီးသည်နှင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းကို သင်၏ကုန်သွယ်မှုအကောင့်သို့ configure လုပ်ပါမည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့၊ မင်းဆီက အီးမေးလ်တစ်စောင် လက်ခံရရှိထားရမယ်။ PantheraTrade4အရေးကြီးသောဒေတာနှင့်အတူ။
Master Password: သင့်ရဲ့လိုင်စင်၏
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၏လျှို့ဝှက်နံပါတ် (ဖတ်ရန်သာ) - XXXXXX
MT4 အက်ပ်တွင်၊ ဆက်တင်များ (အောက်ခြေညာဘက်အိုင်ကွန်) > အကောင့်သစ် > ရှိပြီးသားအကောင့်ဖြင့် အကောင့်ဝင်ရန် ကိုနှိပ်ပါ။
ရှာဖွေရေးဘောက်စ် (အပေါ်ဘက်ရှိ) တွင်- LegoMarketLCC2-LIVE ဟုရေးပါ။
အသုံးပြုသူအမည်- အကောင့်ဝင်ပါ (နံပါတ်များ)။ ပင်မစာမျက်နှာတွင်လည်း ၎င်းတို့ကို သင်ရှာဖွေနိုင်သည်။ Pantheratrade (MT4 အကောင့်)။
စကားဝှက်- ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ စကားဝှက် (ဖတ်ရန်သာ)။ သင် ပျောက်ဆုံးသွားပါက သင်အသုံးပြုခဲ့သည့် စကားဝှက်ကို စမ်းကြည့်ပါ။ Pantheratrade.
သင်၏ဝင်ငွေနှင့် / သို့မဟုတ်သင်၏မြို့တော်မည်သို့ရုပ်သိမ်းရမည်နည်း အချိန်မရွေး ?
အဆင့်2တွင်ဖော်ပြထားသော crypto တွင်သာ သင် ရုပ်သိမ်းနိုင်ပါသည်။ တစ်ခုခုကို ညွှန်ပြထားပါက၊ USDT Crypto Address တွင်သင်ရရှိလိမ့်မည် USDT. ငွေထုတ်ခြင်းများသည် အနည်းဆုံး $50 နှင့် $2000 အောက် အကောင့်များအတွက် တစ်ရက်လျှင် အများဆုံး $100.000 ဖြစ်သည် ။ အပ်နှံထားသည့် $100.000 ကျော်လွန်ပြီး (မရရှိပါ) တွင် တစ်ရက်လျှင် အရင်းအနှီး၏ 10% ကို ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။ ငွေလွှဲခ 15 မှ 35$ ကိုရေတွက်ပါ။ (လိုချင်သောပမာဏနှင့်မသက်ဆိုင်)ရွေးချယ်ထားသောငွေကြေးပေါ် မူတည်.
ငွေထုတ်ရန် site သို့ပြန်လာပါ PantheraTradeအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ ငွေသွင်းငွေထုတ်> ငွေထုတ်.
စာရင်းသွင်းသောအခါ crypto address နေရာတွင်သင်ဖြည့်ခဲ့သောငွေကြေးကိုရွေးပါ။USDT / LTC သို့မဟုတ် အခြား)၊ ထို့နောက် အတည်ပြုပါ။
ပုံ 1 - တောင်းဆိုထားသော အချက်အလက်ကို ဖြည့်စွက်ပါ။
အရင်းအမြစ်များ- သင်၏ MT4 အကောင့် သို့မဟုတ် သင့်ပြန်အမ်းငွေအကောင့်ကို ရွေးပါ။ သင့်အတွင်းပိုင်း Wallet မှလည်း ပြန်လည်ရယူနိုင်ပါသည်။ (စပွန်ဆာပေးသူများအတွက် ကော်မရှင်ခများ).
ပမာဏ US $: သင်ဒေါ်လာဖြင့်ထုတ်ယူလိုသောပမာဏ
အခြေအနေများကို လက်ခံပြီးနောက် အတည်ပြုပါ။ သင့်အား စာမျက်နှာအသစ်သို့ ပြန်ညွှန်းမည်ဖြစ်ပြီး OTP ကုဒ်အပါအဝင် အီးမေးလ်တစ်စောင်ကို တစ်ချိန်တည်းတွင် လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ပုံ2- ထုတ်ယူမှုကို စစ်ဆေးပြီး လက်ခံပါ-
ဤစာမျက်နှာ၏အောက်ခြေတွင်၊ သင့်စကားဝှက်ကို ပြန်လည်ထည့်သွင်းပါ။ PantheraTrade သို့မဟုတ် 2FA ကုဒ် (အီးမေးလ် OTP) ထည့်ရန် ယခု မမေ့ဘဲ။ မရရှိပါက သင့်အီးမေးလ် (hotmail၊ yahoo...) မှ လာနိုင်သည်။ Gmail ဖြင့် အကောင့်ဖွင့်ခြင်းသည် ပြဿနာမရှိပါ။ လိုအပ်ပါက လက်မှတ်တစ်စောင်ကိုဖွင့်ပြီး သင့်လက်ရှိလိပ်စာကို gmail လိပ်စာသို့ ပြောင်းခိုင်းပါ။
ထို့နောက် ငွေပေးငွေယူကို အတည်ပြုပါ။
ငွေထုတ်ငွေကို သင်၏ Exchange တွင် အပ်နှံရန်အတွက် ပျမ်းမျှ 24 နာရီ (စနေ၊ တနင်္ဂနွေများ အပါအဝင်) ကို စောင့်ရပါမည်။ ၎င်းသည် အင်ဒိုနီးရှားနှင့် သင့်နေထိုင်ရာနိုင်ငံကြား အချိန်ကွာခြားမှုအပေါ် မူတည်ပါသည်။
နည်းပညာအကူအညီကို ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲ Autotrade Gold ?
နည်းပညာပံ့ပိုးမှုနောက်ကွယ်မှလူ ၇၀ အနက်တစ် ဦး ကိုဆက်သွယ်ရန် Pantheratradeအောက်ပါအတိုင်းဆက်သွားပါ၊ သင်၏သတင်းကိုအင်္ဂလိပ်သို့မဟုတ်အင်ဒိုနီးရှားသို့အမြဲဘာသာပြန်ပါ။ဘာသာပြန်ဆို google သင့်သူငယ်ချင်းဖြစ်သည်)၊ တိုက်ရိုက်တိကျသော၊ ငွေပေးငွေယူ (txid) ကို သက်သေပြပါ)၊ ကြင်နာ၍ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ပါ။ မေးခွန်းများမေးရန်မဟုတ်ဘဲ ပြဿနာရှိလျှင် အကူအညီကို ဆက်သွယ်ပါ။ စပွန်ဆာများ၊ လူမှုကွန်ရက်များနှင့် ဖိုရမ်များတွင် ဤရည်မှန်းချက်ရှိသည်။ မက်ဆေ့ချ်များစွာ မပို့ပါနှင့်၊ ဆန့်ကျင်ဘက်တွင် ပြဿနာများကို ပိုမိုလျင်မြန်စွာ ဖြေရှင်းရန် ခွင့်မပြုပါ။
အကြောင်းအရာ - သင်၏ပြဿနာကိုဖော်ပြရန်စကားလုံး ၄ လုံးသို့မဟုတ် ၅ လုံး
ဌာန၊ အကောင့်ပံ့ပိုးမှု / ဘဏ္Financeာရေး / ကွန်ယက်ကိုရွေးချယ်ပါ
မက်ဆေ့ဂျ်၊ သင်၏ပြဿနာကိုအင်္ဂလိပ် (သို့) အင်ဒိုနီးရှားလိုရှင်းပြပါ
Image Link: သင်ရှင်းပြထားသောဓာတ်ပုံကိုထည့်ခွင့်ပြုသည်
ထို့နောက် ၂၄ နာရီအတွင်းအဖြေတစ်ခု (စနေ၊ တနင်္ဂနွေ) မပါပါ။ စိတ်ရှည်ပါ။
သင်လိုချင်လား စပွန်ဆာ ATG စက်ရုပ်မှ PantheraTrade ?
အကယ်၍ သင်သည် သူငယ်ချင်းများကို ညွှန်းဆိုကာ လစဉ် အမြတ်ငွေ 15% ဝန်းကျင်မှ အကျိုးခံစားစေလိုပါက စာမျက်နှာပေါ်ရှိ သင်၏ ညွှန်းလင့်ခ်ကို ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ မိတ်ဖက်> ဒက်ရှ်ဘုတ်
သင်၏ရည်ညွန်းချက်များကိုပေးပို့ရမည့် URL သည်ဤပုံနှင့်တူလိမ့်မည်။pantheratrade.live / register /? r = IB ...
တစ် ဦး ၏အခန်းကဏ္.ကို နတ်သမီးလေး ၎င်းသည်မှတ်ပုံတင်ခြင်းမှ ၀ င်ငွေပြန်လည်ရရှိခြင်း၊ ဘဏ်ငွေပေးချေမှုမှ cryptocurrency အထိ၊ အန္တရာယ်များကိုရှင်းပြခြင်း၊ နည်းပညာအထောက်အပံ့များအတွက်အချိန်ယူခြင်းနှင့်လမ်းညွှန်ရန်ဖြစ်သည်။ ကောင်စီ၌၎င်း, စေတနာ.
စပွန်ဆာကော်မရှင် Autotrade Gold
အသုံးပြုသူဟောင်းများအတွက် အကောင့်ဝင်ရန် အကြံပြုချက်များ Pantheratrade
စာရင်းသွင်းပြီးသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် Pantheratrade မတ်လ 18 ရက် 2022 မတိုင်မီနှင့် ဗားရှင်းအသစ်သို့ ချိတ်ဆက်လိုသူ Pantheratrade.
သင့်အကောင့်ဟောင်း၏ အကောင့်ဝင်အီးမေးလ်လိပ်စာကို ထည့်သွင်းပါ။ PantheraTrade ထို့နောက် validation ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
ဤစာမျက်နှာတွင် ပေါင်းစည်းရမည့် သင်၏အသုံးပြုသူအမည်နှင့် ယာယီစကားဝှက်ကို အီးမေးလ်ဖြင့် လက်ခံရရှိလိမ့်မည်- https://live.pantheratrade.tech/AccountLogin.aspx
⚠️ ဤအီးမေးလ်ကို မရရှိပါက အောက်ပါအဆင့်များကို လိုက်နာပါ-
Forgot Password ကိုနှိပ်ပါ။
Pansaka တွင် username နှင့် password မေ့သွားသည်
စာရင်းပေးသွင်းပြီးသူများအတွက် AutoTrade Gold ၂၀၂၁ ခုနှစ်စက်တင်ဘာ ၁ ရက်မတိုင်မီသင်၏ Pansaka login အသေးစိတ်ကိုအီးမေးလ်ဖြင့်မရခဲ့ပေ။ ဒီမှာသူတို့ကိုလက်ခံဖို့အဖြေတစ်ခုရှိတယ်။
backoffice သို့ချိတ်ဆက်ခြင်း https://pansaka.co.id/panel/login.php
link ကိုနှိပ်ပါ။ သင့်ရဲ့စကားဝှက်ကိုမေ့နေပါသလား?
link ကိုနှိပ်ပါ။ အသုံးပြုသူ ID ကိုမေ့နေသလား။ထို့နောက်သင်၏အီးမေးလ်လိပ်စာကိုရိုက်ထည့်ပါ။
သင်၏ login ID ဖြင့်ပထမဆုံးအီးမေးလ်ကိုသင်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ ဒါကနံပါတ်စဉ်တွေပါ။
Pansaka ရဲ့ login page ကိုပြန်သွားပါ။ https://pansaka.co.id/panel/login.phpထို့နောက် link ကိုထပ်နှိပ်ပါ၊ သင်၏စကားဝှက်မေ့နေသလား။ သင်၏ဆက်သွယ်မှုအမှတ်အသား (နံပါတ်များ) ကိုညွှန်ပြခြင်းဖြင့်
Autotrade ၏ CEO ဖြစ်သူ Mr. Dinar Wahyu Saptian Dyfrig ကို အာရုံစိုက်ပါ။
Dinar Wahyu Kenzo အင်ဒိုနီးရှားတွင် လူကြိုက်များသော ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။ အသိအမှတ်ပြုခံရသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ်ဦးသည် ARTI အသင်းကိုယ်စား IT နှင့် နည်းပညာအသစ်ကဏ္ဍအတွက် တာဝန်ယူလာခဲ့သည်။ (အင်ဒိုနီးရှားကုန်သွယ်စက်ရုပ်အသင်း) အင်ဒိုနီးရှားရှိတရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုဖွဲ့စည်းပုံများကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်အသင်း APLI သည် 1984 ခုနှစ်ကတည်းကကွန်ရက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစီမံခန့်ခွဲမှုကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ၏အမြတ်အစွန်းများကြောင့်စိတ်ကြီးသောလူသည် Covid ကာလတွင်လိုအပ်နေသောအင်ဒိုနီးရှားပြည်သူများအားအစားအစာပါဆယ်ထုပ် 10 ကျော်ကိုဖြန့်ဝေခဲ့သည်။ သူသည် Forex ၏အလယ်တွင် အင်္ဂလန်ရှိ RBG ကန့်သတ်ကုမ္ပဏီ၏ မန်နေဂျာဖြစ်ပြီး ပြင်သစ်ရှိလိဂ် 000 နှင့်ညီမျှသော အင်ဒိုနီးရှားဘောလုံးအသင်းကို စပွန်ဆာပေးသည်။
Dinar Wahyu Saptian Dyfrig (ဗဟို) စီအီးအို Autotrade/Pansaka နှင့် အင်ဒိုနီးရှားပါလီမန်ဥက္ကဋ္ဌ Bambang Soesatyo။
တစ် ဦး ခေါင်းကိုင်အဖေ, တစ် godson
တစ်ခုချင်းစီကိုမှတ်ပုံတင်ရည်ညွှန်း link ကိုကနေလုပ်ဖြစ်ပါတယ်!
သင့်တွင်ယခင်ကုန်သွယ်ခြင်း သို့မဟုတ် cryptocurrency အတွေ့အကြုံမရှိသည့်အခါ ဤစွန့်စားမှုအမျိုးအစားကို စတင်ရန်မလွယ်ကူပါ။ အဲဒါကြောင့် မင်းရဲ့အကောင့်တွေကြားထဲမှာ မင်းရဲ့အကောင့်တွေကို စနစ်ထည့်သွင်းဖို့ ကူညီပေးဖို့ မင်းကို ငါကိုယ်တိုင်ခွင့်ပြုထားတယ်။ broker (ပွဲစား) နှင့်သင့် ကုန်သွယ်စက်ရုပ်သက်ဆိုင်ရာမေးခွန်းများကို ဖြေပြီး နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကူညီပါ။ စက်ရုပ်အချို့တွင် တွဲဖက်လင့်ခ်ကို သင်ရှာမတွေ့ပါက၊ ၎င်းကို ကျွန်ုပ်မဖော်ပြလိုသောကြောင့် ဖြစ်သည်- ၎င်းကို စာရင်းစစ်နေသည် သို့မဟုတ် သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။ ထို့အပြင်၊ သင်သည် နည်းပညာဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကူညီမှုကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပြီး သင်၏ ညွှန်းဆိုချက်များကို မှန်ကန်စွာ လိုက်ပါဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လိုအပ်သောကြောင့် သင့်အား လွှဲပြောင်းပေးသည့်လင့်ခ်များကို အငမ်းမရ ပေးဆောင်ခြင်းအတွက် ကျွန်ုပ်အန္တရာယ် မယူပါ။
Broker ASIC တွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည်။
🥇 Capital min ။ ± $ 250
🥇 မင်း ± 1300$
2022 တွင် ရနိုင်သည်။
မြို့တော် min ± €50
မြို့တော် min ။ ± $ 10
ကျွန်ုပ်အား eg တယ်လီဂရမ်တွင်ကျွန်ုပ်ကိုဆက်သွယ်ရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။ သင့်အားကျွန်ုပ်အကြံပေးပြီးသင့်ကိုကူညီနိုင်မည်။
ဝဘ်ပေါ်ရှိ Forex လိမ်လည်မှုကိုသတိထားပါ
AMF မှထုတ်ပေးသည့်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲကုမ္ပဏီများနှင့်ဆိုဒ်များ၏နာမည်ပျက်စာရင်းကိုရှာဖွေပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ရုပ်တွေရော၊ brokerမပါဝင်ပါဘူး
ဤဆိုက်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အကြံဉာဏ် မရှိပါ။
ကုန်သွယ်မှုသည် သင့်အား အပ်ငွေများနှင့် ညီမျှသော ဆုံးရှုံးမှုအန္တရာယ်များကို ဖော်ထုတ်ပေးပြီး ဤအန္တရာယ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော ငွေကြေးနည်းလမ်းရှိသည့် ကောင်းစွာသိရှိထားသော ဖောက်သည်များအတွက်သာ သင့်လျော်ပါသည်။ အတိတ်ရလဒ်များသည် အနာဂတ်ရလဒ်များကို ညွှန်ပြခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဝယ်ယူသူသည် ရရှိထားသော အချက်အလက်များကို အသုံးပြုမှုအတွက် တစ်ခုတည်း၌သာ တာဝန်ရှိပြီး ဤအသုံးပြုမှုနှင့် ဆက်စပ်နေသော အန္တရာယ်အားလုံးကို ယူဆသည်။ အထူးသဖြင့် မြို့တော်၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်သော အစီအမံများအားလုံးကို လည်ပတ်သူ အနေဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိသည်။ Robots-trading.fr, cryptonithe.com သို့မဟုတ် mon-conseiller-crypto.fr နှင့်၎င်း၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများသည်ဖြစ်နိုင်သည့်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်တာဝန်ယူလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ငါတို့ကိုဖတ်ပါ။ ဝန်ဆောင်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ နှင့်ငါတို့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုစာချုပ်.